Indawo epholileyo nexhotyiswe kakuhle enesango lokungena elahlukileyo ibekwe kumbindi welali kumgangatho wokuqala kwaye iyafikeleleka ngezitepsi zangaphandle. Indawo yokupaka iyafumaneka kwi-carport. Isikhululo sikaloliwe sinokufikelelwa kwimizuzu emi-5, iimveliso zokubhaka kunye nevenkile ethengisa inyama ecaleni komnyango. Ezinye iindawo ezingaphakathi komgama ozimitha ezingama-500. I-Winnweiler inedama lokuqubha langaphandle kunye namathuba amaninzi okunyuka intaba kunye neendlela eziphuhliswe kakuhle zebhayisekile.
Ukongeza kwizitya, iimbiza kunye neepani, ikhitshi ixhotyiswe ngumenzi wekofu, i-sandwich toaster, i-toaster, ibhoyila yeqanda, i-kettle, i-oven microwave enomoya oshushu, ifriji kunye ne-extractor hood. Intsimbi, isicoci sevacuum kunye nomtshayelo nazo ziyafumaneka.
Umnyango olandelayo yindawo entle ye-ayisikrimu yaseTaliyane enepizzeria. Izinto ezibonakalayo eWinnweiler yicawa, isikhumbuzo semfazwe kunye neMyuziyam yamaYuda. Ipaki encinci kwindawo ekufutshane ikumema ukuba uhlale.
Iindlela ezimangalisayo zokunyuka intaba kunye neendawo zokundwendwela kwindawo ekufutshane, umz. Imsbach ene-Weißer Grube, Falkenstein enenqaba kunye nomnyhadala wenqaba, iSchweisweiler enecawe yaseRococo, ...
Ndiyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo ngefowuni okanye ngokobuqu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Winnweiler